राष्ट्रिय – Page9– JanaSanchar.com
इटालियन ठेकदार कम्पनी सीएमसीले निर्माणाधीन मेलम्ची खानेपानी आयोजना छाडेको घोषणा गरेको छ । तर, सरकारले भने उसको पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको छ । ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि आयोजनाको बाँकी काम गर्न नसक्ने व्यहोराको पत्र बोकेर आइतबार मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पुगेका थिए । तर, आयोजनाका अधिकारीहरुले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेका छन् । खानेपानी..
क्रिकेटर शक्ति गौचनले सन्यास लिने घोषणा गरेका छन्। नेदरल्याण्डसँगको खेलबाट सन्यास लिने उपयुक्त समय भएको भन्दै उनले सन्यासको घोषणा गरेका हुन्। नेपालमै एउटा खेल खेलेर सन्यास लिने उनले बताए। लड्समा हुने खेलको लागि आयोजना गरिएको विदाई कार्यक्रममा शक्तिले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। 'मुलुकलाई एक दिवसीय मान्यता दिलाएर सन्यास लिन पाउनु मेरो..
सफाई पाएपनि म्याच फिक्सिंग आरोप लागेका खेलाडीलाई क्षतिपुर्ति कसले दिने ?
म्याच फिक्सिङको आरोप लागेका फुटबलर सागर थापासहित ६ जनाले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि जिन्दगीकै सबैभन्दा कठिन समयबाट बाहिर निस्कन पाएको भन्दै खुशी साटासाट गरेका छन् । राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा खेपेका उनीहरुले सफाइपछि विशेष अदालत परिसरमै आरोपसहित बाँचेको कठिन तीन वर्ष सम्झिरहेका थिए । राष्ट्रिय फुटबल टिमका तत्कालिन कप्तान सागर..
के जाला त नेपाल विश्वकपमा ? विश्वकप क्रिकेट छनोटः जिम्बाब्बेसँग खेल्दै
आइसीसी एकविदवशीय विश्वकप छनौटका निम्ति आज नेपाल र जिम्बाबेबीच प्रतिष्पर्धा हुने भएको छ । नेपालले पहिलो पटक एक दिवसीय टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्रसँग खेल्न लागेको हो । खेल जिम्बाबेको घरेलु मैदानमा नेपाली समयअनुसार दिउँसो १ः१५ बजे हुने कार्यतालिका छ । कुनै पनि टेस्ट राष्ट्रविरुद्ध नेपाली राष्ट्रिय टिमको भिडन्त यो दोस्रो हो ।..